Gabre oo laga wareejiyay howlihii shaqo ee uu ka hayay Arrimaha Soomaaliya – Hornafrik Media Network
Gabre oo laga wareejiyay howlihii shaqo ee uu ka hayay Arrimaha Soomaaliya
Dowladda Federaalka Ethiopia oo xilligan ah shir gudoonka IGAD ayaa dib ugu yeertay Colonel Gabre Egziabher Alemseged oo ahaa Lataliyaha siyaasadda, xafiiska IGAD ee fududeeya nabadda iyo dib u heshiisiinta Soomaalida, waxaana taasi ay ka dhigan tahay in ka sii shaqeyntiisa xafiiskaasi ay gebi ahaan dhammaatay.
Sida wararku sheegayaan, ninkan oo shaki badan la geliyo Jeneraalnimadiisa, ayaa hadana dad badan oo xog ogaal ahi waxay sheegeen in heerka darajadiisa ciidan ay gaarsiisan tahay Colonel.
Colonel Gabre Egziabher ayaa dib uga howlgali doona laamaha sirdoonka Ciidamada difaaca qaranka Ethiopia, waxaana muddo ku dhow seddex sano lagu arkayay madallada siyaasadda iyo ammaanka Soomaalida, taasi oo u fududeysay xafiiska uu ka shaqeynayay.
Colenel Gabre ayaa wajahaya eedeymo ku tumasho xuquuqda aadanaha iyo musuq maasuq mudadii uu ka mid ahaa hoggaannada ugu sarreeya ciidamada Ethiopia ee howlgallada ka fulinayay Magaalada Muqdisho sanadihii 2006, 2007, 2009.
Sarkaalkani Ethiopian-ka ah ayaa sabab u ahaa in dad badan oo aan waxba galabsan lagu laayo waqooyiga iyo Koonfurta Soomaaliya, waxaana dhacdooyinkii ugu muragada badnaa ay ahaayeen 18 ruux oo rayid ah oo gaari caasi ah wada saarnaa oo ciidankiisu ku gowraceen agagaarka carbiska iyo lafaha madaxyo dad dhintay oo laga helay garoonka weyn ee Stadium Muqdisho markii ciidankiisu ay dib uga baxeen dalka.
Colonel Gabre ayaa laaluush lacageed ka qaadi jiray shirkado ganacsi oo ka jira Muqdisho si dhismayaasha ay leeyihiin uga nabad-galaan madaafiicda sida ba’an ay u ridayeen ciidankiisa, xilligii ciidamada Itoobiyaanka Muqdisho joogeen.
Si kastaba is bedelkan lagu sameeyay dhamaan howl wadeenada ka shaqeynayay Xafiiska IGAD ee qeybta Nabadda iyo Dib u heshiisiinta ayaa ku soo aadaya, xilli Ergey cusub ay urur Goboleedka IGAD u soo magacawday Soomaaliya, kaasoo bedelaya ergeygii hore Maxamed Cabdi Afey.